Andao Hamerina An’I Twitter Azafady · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Novambra 2016 14:47 GMT
Pikantsary avy amin'ny lahatsary fanentanana Isika Twitter
Ho an'ny maro amintsika Twitter no haingana indrindra sady fomba tsotra indrindra ahafantarana sy hizarana ny zava-mitranga manodidina antsika. Mampifandray ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana sy mandefa fifanakalozan-kevitra maika izy, manaparitaka vaovao lehibe sy manome hery ireo hetsika maneran-tany ihany koa.
Na izany aza, ahiana indrindra ho amidy sy hivarotra ny mpisera ao aminy i Twitter Inc. Mihevitra i Wall Street fa tsy nahomby ny orinasa satria tsy nahazo tombony ho an'ny mpitazona ny petrabolany izy. Tsy liana tamin'izany ireo orinasa manankarena izay heverina mety hividy azy- toy ny Google, Salesforce, Disney, Microsoft .
Noho io faravodilanitra mampalahelo io no nahatonga ny hetsika manerantany tsy mitsaha-mitombo mandrisika an'i Twitter Inc hiara-hiasa amin'ny mpisera ao aminy hifanampy amin'ny fomba hividianana ny orinasa sy hanova azy ho sehatra iray iombonan'olona maro. Tian'ity hetsika ity ny orinasa hizara ny ho aviny amin'ireo nahatonga azy ho manan-danja tokoa ny fandraisany anjara–dia ireo mpisera azy–fa tsy hivarotra azy amin'izay mahasahy ambony indrindra.
Navoakan'ny lahatsoratra iray tao amin'ny Guardian nosoratan’ i Nathan Schneider, mpanao gazety sy mpikaroka voaasa ho ao amin'ny Boulder, Oniversiten'i Colorado, tamin'ny volana septambra fa efa mandeha ny fanentanana hanaovana izay hahatontosana izany amin'izao fotoana izao . Mifototra amin'ny fanangonan-tsonia amin'ny fiteny maro izany, izay efa nahazo sonia maherin'ny 2.700 tamin'ny fotoana nanoratana azy ity, miaraka amin'ny tenirohy #TwitterIzahay sy #VidioTwitter. Misy ihany koa ny vondrona misokatra Loomio izay manapa-kevitra amin'ny dingana manaraka, sy ny fantsona Slack hifanakalozan-kevitra lalina kokoa ary ny fandrindrana ny tetikasa vonjimaika.
Fitaovana iray lehibe hanarahana ny zava-mitranga maneran-tany amin'izao fotoana izao
Toy ny antsipika amin'ny fikatrohana nomerika sy amin'ny fifanakalozan-kevitra maneran-tany ny Twitter. Loharanom-baovao manokana manan-danja indrindra izy ho an'ny fampitam-baovao tsy miankina, ary efa nandray anjara tamin'ny fanovana lehibe tamin'ny fomba nitaterana ny vaovao farany manerana izao tontolo izao – sy ireo izay mifehy ny vaovao.
Mpitari-dalana amin'ny fampiasana ny Twitter ho fanangonam-baovao ny Global Voices, mampiasa izany mba ahafahany mitsongo dia sy mitatitra ny zava-misy sy ny zava-mitranga nomarihan'ireo mpikatroka ao an-toerana voalohany, ohatra, ny fitroarana Arabo tamin'ny taona 2011. Nahatonga fifandraisana akaiky ato amin'ny aterineto eo amin'ireo mpisera nisioka sy ireo mpisera mampita ny votoatin-tsioka izany, ary lasa fitaovana mahomby tamin'ny fanamafisana ny fifandraisan'ny vondrom-piarahamonina.
Nanomboka nampiasa ny Twitter tsy amin'ny fanangonana na fizaram-baovao ary fanamarinam-baovao ara-potoana ihany i Andy Carvin—ilay mpamolavola tetipanorona media sosialy amin'ny NPR—fa misera aminy ihany koa hamantarana ireo tantara miafin‘ny olona izay miady ho amin'ny fahafahana eny an-dalambe sy manerana ny aterineto.
Amin'ireo tranga roa ireo, manome vaovao sy mitondra fomba fanavaozam-baovao mivantana avy any amin'ny toerana hitrangan'ny zava-misy ny Twitter na dia teo aza ny tsy fahampian'ny mpitati-baovao eny ifotony sy ny fiatrehana ny sivan'ny governemanta, fitantarana izay ataon'ireo fampitam-baovao mahazatra tandrefana ny ankamaroany .
Tranga iray hafa izay nofaritan'ny Twitter tamin'ny fomba maro ny fifidianana filoham-pirenena tany Etazonia vao vita vao haingana. Namoaka sioka maherin'ny iray lavitrisa ireo mpisera nanomboka tamin'ny Aogositra, miaraka amin'ny tantaran'ireo kandidà roa izay niteraka fanavaozam-baovao tsy tapaka, na tsara na ratsy io, ary notoherina tamin'ny alàlan'ny fanamarinam-baovao sy sary-sy-soratra.
Nanome ny votoatin'ny fanambarana vao haingana nataon'i Jack Dorsey Filoha Tale Jeneralin'ny Twitter izany endri-tany samihafa izany, izay niantso ny sehatra ho “tambajotram-baovaom-bahoaka “, ary te-hiorina ambonin'izany ireo manao fanentanana ny Twitter ho fananana iombonan'olona maro. Manontany ny Twitter ho toy ny olona iray ny teny fampidirana tao amin'ny taratasy fanentanana hoe :
“Raha tena an'ny vahoaka tokoa ianao? Tsy aleonay ve mitady fomba hividiananay anao ?
Te hanana teny ao amin'ny rafitra mamolavola ny fiainanay sy ny vondrom-piarahamoninay izahay. Te hitady fomba hananganana soatoavina miaraka izahay, ary tianay izany soatoavina izany hanamafy ny niombonanana natsanganay, toy izay ho atao lavanty ao amin'ny Wall Street.
Te-hanao fifanarahana izahay hahazoana antoka fa lehibe ianao, ary ny fahalehibeazana tratrarinay miaraka no mety ho tanjonao manan-danja indrindra, noho ny famenoana fotsiny ny paoketran'ireo mpihary harena sasany . Mihevitra izahay fa afaka mihary zavatra miasa, mipaka lalina, ary mivoatra amin'ny fomba mahatalanjona.
Amin'izay fotoana izay, ny hahatongavana amin'ny fifanarahana ara-drariny no tena tanjon'ny fanentanana—fifanarahana manome valin-kasasarana ary mahatafiditra ireo olona nanampy tamin'ny fananganana ny Twitter tiantsika .
Mbola lavitra ny lalana kanefa…
Moa ve hevitra adala tanteraka izany? Angamba. Ary tsy kely izany satria mila fankatoavana avy amin'ny filan-kevi-pitantanana sy ireo manana taratasim-pananana renivola ny famadihana ny Twitter ho karazana koperativan'ny mpisera. Midika fanapahan-kevitra sarotra sy vola be izany. Manomboka izao, ny lafiny ara-teknika amin'izany fifanarahana izany no ifanakalozan-kevitra. Fa ny tena zava-dehibe, mahatonga adihevitra vaovao mikasika ny modely hafan'ny fananana maha-tompony amin'ny media sosialy sy ny orinasa an-tserasera ity “hevitra adala ” ity.
Misy koa ny fironana tsikelikely mankany amin'ny fananganana aterineto iaraha-manana sy iasana [koperativa] ary andraisan'ny rehetra bebe kokoa, ary tafiditra ao anatin'ny hetsiky ny sehatra iaraha-miasa sy manana [koperativa] lehibe kokoa misarika olona, fihariana, ary tanàndehibe manerana izao tontolo izao. Tsy ny zava-drehetra ao amin'ny aterineto no mila miasa tahaka ny Google na Facebook. Ny fitsinjaram-pahefana sy ny fandraisan’ ireo mpisera anjara no ho lakilen'ny aterineto rahampitso- aterineton'ny vahoaka, avy amin'ny vahoaka, ho an'ny vahoaka.